Afuura Harmee isa Dhumaa!! - Asoosama Gabaaba Seenaa Dhugaa
Afuura Harmee isa Dhumaa
Ani mucaa hangafaa ti. Obboleettii koo ishee xiqqoo faana waggaa lama qofa wal caalla. Kan dhalannee guddanne Oromiyaa Lixaa, Aanaa Giddaa Ayyaanaa, baadiyyaa keessatti. Akkuma dhala qote bulaa kamuu guddatutti dhalannee jireenya baadiyyaa dhamdhamuu eegallee jirra.
Abbaan keenya Caalchisaa Jabeessaa jedhama obboleettiin koo dhalattee gaafa bultii shanii (shanan) balbala mana keenyaa waddeessa guddaa jiru irratti osoo hoolaa rarraasee harmee koo deessee kaateef qalaa jiruu rasaasa iddoo dhukaafame hin beekamneen rukutamee akka du’e haati koo naaf himtee jirti.
Akkan odeeffannoo qabutti abbaan koo irraa deddeebiin hidhamaa akka ture dha. Maaliif akka hidhamaa ture yoon gaafadhes haati koo naaf himuu baattus booda anuu ollaa fi firarraa baree qulqulleeffadheera.
Abbaan koo jaalatamaa, kabajamaa, sabboonaa, abbaa firaa, haga namni nyaatee fi dhuge kan hin beekne kan harkisaa bal’aa nama guddaa ture. Ani hedduu isa hin beeku. Akkan amma yaadutti abbaa akkanaa harkatti guddachuun eebbifamuu dha jedheen yaada.
Mee kan Abbaa koo koo maal isinitti himaa kan koo bukoo hedduutu jiraam. Ani gubattuu kootu jiraata. Egaa abbaan nurraa du’ee haati koo haadha hiyyeessaa taatee bakka abbaattis, haadhaattis, obboleessas taatee nu guddisuu itti fufte. Akkanaan baroota saddeettan tokko jiraanne. Ani waggaa 10 guute obboleettiin koos waggaa saddeet guutte.
Anii fi obboleettiin koo harmee keenyaa waliin bakka adda addaa ni deemna. Isheenis jiruu fi jireenya hundaa baruu qabdu gaafan du’e fira hin qabdan harka namaa akka hin ilaalle nuun jechaa turte. Gaafas ittan aara,maaliif akkas dubbattin jedha. Edaa isheen manaabaan waa agarti fakkaata. Dhuguma akkuma isheen jette gorsii fi barnootni isheen anaafis ta’e obboleettii koof laataa turte utubaa ta’ee nu dhaabee jira. Utubaa mekedee taaanee jilbi keenya gad jabaatee dhaabatee jira.
Harmeen yeroo ani waggaa 10 waan adda addaa akka ishee dhiphisu irrattin arga. Garuu, anaaf ibsa gahaa naaf hin laattu. Guyyaa Dilbataa tokko bulchaan gandaa keenya tokko dhufee harmee kootti gadi waamee sagalee jajjabaa dubbataa ture. Anis gadi fiigeen haadha kootti hin iyyiin jedheen boo’e. Innis nahee ulee qabatee ture harkaa kufee fiigaa mooraa keenya keessaa bahee deeme.
Haati koos ji’oota lamaan booda qe’ee keenya kan keessatti horree,qotannee dhabaa fi qabeenya agarree guddanne keessaa akka deemnu nutti himte. Maaliif deemna jedhee gaafannaan deebiin isheen naa laatte ”Magaalaatti gallee barumsa keessan barachuu qabdu” naan jette. Anoo badaasaa hin naane. Natti tole. Booda kanan hubadhe akka isheen dhiibbaa warra bittootaa fi oftuultotaan daaraa fi kosii isheerraa akka kaate.
Kanumaan Magaalaa Naqamtee,Ganda 04 (SAFARA MAARAMII) jedhamuun beekamu tokko mana xiqqoo tokko kireeffannee jiraachuu eegalle.Achuma jiraataa osoo jirruu nutis mana barumsaa Qassoo galmoofnee barachuu itti fufne.
Haati keenya farsoo gurgurtee nu jiraachifti. Garuu,guyyaa guyyaan fayyaan ishee gadi deemaa dhufe. Waggaa 5 booda garmalee huuqqachaa deemte. Hojii akka durii hojjechuu n itti ulfaate.
Anii fi obboleettiin koo ishee tajaajiluuf mana barnootaa addaan kutnee manatti deebine. Waan namatti tolu namni Magaalaa Naqamtee Uummata nama waliin boo’u,beela’u,lafa gammachuutti nama waliin gammadu dha. Namootni qabeenya qaban hedduun gargaarsa nuu godhanii yaalamtus homaa hiika dhabe.
Isa dhumaa guyyaa dilbataa tokko ganamaan kaatee qarabaa qeensaa gadi naa fidi jettee natti himte. Anis qarabaa girgijjii irraaan fidee itti kenne. Isheenis qeensa miilaa fi harka ishee qoratte. Elaa qeensaa koo isan ofirraa qore kana karaarraa achi maqsii gati naan jette harkaan lafarraa walitti butaa. Qeensi safuu qaba jedhama mitiiree?
Sana booda bishaan naa ho’isi jette. Qaamashee dhiqattee mee buna ho’aasaa naa danfisi jette. Anis buna isa ija kormaa lukkuu fakkaatu danfiseefii. Sanaan booda lafa isheen ciiftu siree bira geesseen buna dhiyeesse, Buna shinii tokko buuseefiin booda anaa fi obboleettii koo nu waamtee harka keenya lamaan wal qabsiiftee akkas naan jette.
”Dhala koo siin namattan kennu hin qabu. Ishee xinnoo kana garuu siif Waaqattin kenna. Lafatti sitti kenne Waaqarrattan si harkaa fudha. Abbaas, Haadhas, Obboleettiis, Obboleessas ta’ii guddisi. Dhabni gargar isin hin baasiin. Qabeenyis wal isin hin jibbisiisiin. Damma ta’aa walitti mi’aawaa. Haphee ta’aa wal qabadhaa!!” jechuufii afuurri ishee keessaa harachuun takkaa ta’e.
Egaa lafatu natti naanna’e…lafan seenun dhabe. Haga har’aa hirriba keessaan ka’ee balbala banee bahee namatu alatti na qaba. Ykn ofuma koon of baree nahee fiigee ol seena.
Ani haadha ijoollee afurii ta’eera. Obboleettii koos barsiifadhee carraa barnootaan biyya Ameerikaa deemtee achitti maatii horattee jirti. Anaa fi obboleettii koof darbeera. Garuu,Abbaa koo isa harka diinaatti du’e fi haadha koo ishee yaadaa fi yaaddoo abbaa koon lafarraa dabartetu caba laphee ta’ee nutti hafe.